Nikasa hisoloky 40 tapitrisa Ar : noraisim-potsiny ireo telo lahy nisandoka ho talen’ny kabinetra | NewsMada
Nikasa hisoloky 40 tapitrisa Ar : noraisim-potsiny ireo telo lahy nisandoka ho talen’ny kabinetra
Par Taratra sur 22/02/2016
Noraisim-potsiny! Voasambotry ny mpitandro filaminana tao Manakarabe, ny 19 febroary 2016 teo ireo telo lahy nisandoka ho Dir Cab-n’ny Antenimieram-pirenena. Nikasa haka vola mitentina 40 tapitrisa Ar tamin’olona iray tany an-toerana izy ireo…
Nokasain’ireto mpisoloky ireto hakana lelavola mitentina 40 tapitrisa Ar ny fianakaviana manam-boninahitra mipetraka ao Manakarabe, araka ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray any an-toerana. Voalaza fa manana karatra maha mahatihanina izay misoratra amin’ny anaran’ny Dir Cab-n’ny Antenimieram-pirenena Nono Ben Said ry zalahy ireto. Saingy tsy misy akory anefa io anarana io taorian’ny fanamarinana nataon’ny mpitandro filaminana ao Manakara. Saika hanindry bokotra sy hampihorohoro ilay olona hosolokiany amin’ny maha olom-panjakana azy ry zalahy nefa tratra ihany taorian’izay fa mpisoloky izy ireo. Ao anatina tambazotra goavana momba ny fisolokiana avo lenta ireto mpisoloky ireto.
Ao anatin’ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana misahana ity raharaha ity ka aorian’izay no fantatra ny marina rehetra momba ity fisandohana andraikitra goavana ity. Niaiky ny heloka vitany rahateo ireo voarohirohy, raha ny fanazavana voaray hatrany.
Tsy vao izao no nisy andian’olona misandoka sy mitondra karatra maha matihanin’ireny andrimpanjakana ambony eto amin’ny firenena ireny mba hisolokiana olona.